Unyaka wezikhululo zeenqwelo moya: hamba uye kwiindawo ezizayo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Unyaka wezikhululo zeenqwelo moya: hamba uye kwiindawo ezizayo
Airlines • isikhululo • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zase China eziQhekezayo • I-Israel Iphula Iindaba • iindaba • ISpain Iindaba Eziphambili • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zaseTurkey zokuPhula • Iindaba eziHlumayo zase-UK • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba eziVuthayo zaseVietnam
Unyaka ka-2019 uzakukhunjulwa njengonyaka wokuphehlelelwa kwezikhululo zeenqwelo moya ezinkulu nezincinci ukwanelisa ibango lomoya eliza kuthi ngo-2035 lichukumise- ngokwe-IATA- i-8.2 yeebhiliyoni yabakhweli abahamba ngenqwelo moya.
Ukuphela konyaka, izikhululo zeenqwelo moya ezisixhenxe ziya kuvula amasango abo kwiimbombo ezahlukeneyo zehlabathi.
Ukuqala ngesikhululo seenqwelomoya esitsha saseDaxing eBeijing, isikhululo seenqwelomoya esityikitywe nguZaha Hadid ekufuneka siqale ukusebenza phakathi kukaJuni noSeptemba, sizibeka phezulu kwizinga lezikhululo zeenqwelomoya ezinkulu emhlabeni. Ukusuka kubakhweli abazizigidi ezingama-45 iya kujolisa ekuphatheni kwezithuthi, inokubetha ngaphezulu kwabantu abangama-72 ezigidi ngo-2025.
Iindleko zeziseko zophuhliso zi malunga ne-12 yezigidigidi zeedola kwaye yagunyaziswa nguMongameli u-Xi Jinping kwi-2014 ukukhanyisa isikhululo senqwelomoya saseBeijing. Ngeengoma ezisixhenxe, iya kuba yindawo ekubhekiswa kuyo kwiinqwelomoya zaseMpumalanga Airlines nase China Southern Airlines.
Isikhululo seenqwelomoya, esikummandla weHebei, siza kudityaniswa nohola wendlela kunye nesantya esiphezulu sothungelwano lukaloliwe ukufikelela ngokukhawuleza eBeijing. Ngokwe-Civil Aviation Administration yase-China, isigebenga sase-Asiya siya kulawula malunga ne-720 yezigidi zabakhweli nge-2020, umhla ekulindeleke ukuba kwakhiwe okanye kwandiswe ngawo izikhululo zeenqwelo moya ezingama-74. Ukujonga phambili, ngowama-2035, izikhululo zeenqwelo moya ezingama-216 ziya kusekwa eChina, zizonke iziseko zomoya ezingama-450.
Isikhululo senqwelomoya iVan Don samiselwa ekuqaleni konyaka eVietnam, ebekwe kwiikhilomitha ezingama-50 ukusuka eHa Long Bay kwiphondo laseQuang Ninh. Isikhululo seenqwelomoya sixabisa malunga ne-260 yezigidi zeerandi kwaye sisikhululo seenqwelomoya sokuqala sabucala elizweni, sisiphumo sokwahluka kotyalo-mali olufunwa ngurhulumente wobukomanisi.
Ezi ndlela zimbini zisebenzayo, eziza kuthi zibe zihlanu ngo-2030, sele zinokuqinisekisa ngokuhamba kwabahambi ngezigidi ezi-2.5. I-Van Don iya kuba yindawo ekubhekiswa kuyo kwiinqwelomoya zase-Vietnam Airlines kunye naseViet Jet Air zonxibelelwano eMzantsi-mpuma Asia.
Isikhululo senqwelomoya iRamon siyasebenza kulo nyaka kwaye sisibonelelo sanamhlanje embindini wentlango yeNegev, kwiikhilomitha ezili-18 ukusuka e-Eilat kuLwandle Olubomvu.
Ubume obubiza i-500 yezigidi zeedola bujolise ekusebenzeni njengenye yehabhu yeTel Aviv, eyona moya iphambili kweli lizwe. Isikhululo seenqwelomoya sathiywa ngegama likaIlan Ramon, usomajukujuku wokuqala wakwa-Israeli, kwaye yayilelwe ukumelana namaqondo obushushu afikelela kuma-46 degrees celcius. Umthamo wayo okwangoku ungabagibeli abazizigidi ezi-2 ngonyaka, kodwa iya kuba nakho ukubonelela ukuya kuthi ga kwi-4.2 yezigidi ngo-2030.
Ngekwindla ye-2019, ukusebenza kwesikhululo seenqwelomoya esitsha i-Istanbul eTurkey, esikwiikhilomitha ezingama-35 ukusuka embindini wedolophu, kuya kugqitywa ngokudlulisa zonke iinqwelomoya eziqhutywa zizikhululo zeenqwelo moya ezimbini eAtatürk naseSabiha Gokcen.
Ukulibaziseka kunye nokwehla kolwakhiwo kulibazisile ukuvulwa kokuqala okucwangciselwe u-2018 emva koko kwamiswa ekuqaleni kuka-Epreli 2019 ngokudlula kweenqwelo moya zeTurkey Airlines kwisikhululo seenqwelomoya esitsha.
Ngomthamo wokuqala wabantu abazizigidi ezingama-90, isikhululo seenqwelomoya siya kuba nakho ukuphatha intshukumo yabakhweli abazizigidi ezingama-200 ngonyaka ngokupheleleyo.
Ekupheleni kwendlela yayo yendaleko, isikhululo seenqwelomoya esitsha saseTurkey siya kuba neendlela zokubaleka ezintandathu kwaye ziya kubonelela ngokudibana kwenqwelomoya kwiindawo ezingama-350 kwihlabathi liphela. "Njengeziko eliphambili lokutshintshiselana phakathi kweAsia, iYurophu, kunye neMbindi Mpuma, siza kuya kumazwe ahlukeneyo ehlabathi," utshilo uKadri Samsunlu, igosa eliyintloko leIga Airport Operations, inkampani ebisakha iziseko zophuhliso ukusukela nge2013. .
Ngaphandle kolwandle, ukuvulwa okulindelweyo seso sikhululo seenqwelomoya saseLouis Armstrong eNew Orleans, eLouisana, esimiselwe ukuphela kukaMeyi. Ixabisa i-1.3 yezigidigidi zeedola, i-terminal inamasango angama-35 kunye nenkqubo yokujonga ukhuseleko ngokufikelela ngokukhawuleza kulawulo.
Isikhululo seenqwelomoya siza kuba sisiseko sokusebenza kweenkampani ezingama-21 ezinomndilili wonyaka wokuhamba ngaphezulu kwesigidi se-13 sabakhweli. E-United States, umsebenzi uya kuqhubeka nokuphucula i-La Guardia Airport eNew York, esinye sezona zikhululo zeenqwelo moya eziphazamisayo nezinoxinzelelo eMelika.
Amanyathelo okungenelela okwakhiwa ngokutsha acwangciselwe i-9 yezigidigidi zeedola, inxalenye yayo esele igqityiwe ngokuvulwa kweTheminali B entsha kunyaka ophelileyo.
NgoJulayi, e-United Kingdom, iSikhululo senqwelomoya saseCarlisle Lake siya kuvulwa, silungiselelwe ukuhanjiswa kwezithuthi kwingingqi yaseLondon, eDublin naseBelfast. Isikhululo seenqwelomoya esincinci kodwa esiliqhinga sijolise ekwaneliseni ibango labakhenkethi eCumbria, indawo ekumantla ntshona eNgilane ephethe iLake District National Park.
Lo mmandla uphakathi kweyona ndawo intle e-United Kingdom kwaye watyelelwa kunyaka ophelileyo ngabantu abazizigidi ezingama-47, ubukhulu becala ukugcwala kwasekhaya, nto leyo eyenze ukuba kufunyanwe ingeniso ephantse ibe ziibhiliyoni ezi-3.5 zeerandi.
Esinye isikhululo seenqwelomoya saseYurophu esasungulwa ekupheleni kwe-2019 sisikhululo senqwelomoya saseCorvera eSpain esixabisa i-500 yezigidi zeerandi, kwaye siqhagamshelwe kakuhle kwinethiwekhi yebhasi.
isakhiwo yakhiwe ibhasi isikhundla inkunzi iziko khangela umphathi Igosa eliphethe i-ofisi I-China esemazantsi China Southern Airlines Umbindi City Aviation yoluntu ikomanisi iinkampani gqityiwe Uqhagamshelwano lawulo indleko indleko County okwangoku Umhla ukulibaziseka imfuneko Entlango yenzelwe hlukile WeSithili dollar lwasekhaya Dublin ekuqaleni Bucala ngasekhohlo asempumalanga Eastern Airlines I-Eilat isiphelo eNgilani aseYurophu kowethu utshintshiselwano landiswa kulindeleke Indawo ngokupheleleyo amasango enkulu isiqinisekiso EHa Long Bay isantya esiphezulu umgwaqo omkhulu betha yamabandla Hub amazimba IATA yamkelwe iziseko Isiza sezindiza utyalo Sirayeli Israel Istanbul Isikhululo senqwelomoya iIstanbul jet Isilimela iikhilomitha ubukumkani LA kwexesha mhlawumbi ikhona London Khangela Louisiana eyona lawula Ephakathi Phakathi empuma abakhweli abazizigidi Isigidi sabantu mihla ezintle kakhulu intshukumo ogama Ipaki yelizwe womnatha kwisikhululo seenqwelomoya esitsha New Orleans Indawo entsha Inew york Emantla ntshona elwandle igosa vu lekile iyasebenza umsebenzi iyasebenza Imisebenzi ipaki indlela kuhlelwe ku rhoxiswa abucala iphondo loliwe irekhodi Bomvu Ulwandle oluBomvu kwingingqi uhlengahlengiso iindlela zokubaleka Wanelisekile ku cwangciswe Ulwandle ukhuseleko EyoMsintsi Cwangcisa Sixhenxe sayinwe amancinane Southeast mpuma Asia Southern I-Airlines esemaZantsi Speyin ukuqala Ithi buchule inoxinzelelo Ulwakhiwo isakhiwo isixokelelwano Tel Tel Aviv lobushushu kwisigxina iunited States lilonke zendlela tshintshelo ikarikuni Oosaziwayo Airlines Turkish iunited Kingdom eunited States i-USA van Vietnam Vietnam Airlines tyelela inkulu ehlabathini Ehlabathini lonke Xi York